Amazwi kaMay | Isimo Sezulu Senethiwekhi
Cishe ngaphandle kokuqaphela, sizithola sisenyangeni kaMeyi, owesihlanu wonyaka futhi ungenye yezinto ezinhle kakhulu eNyakatho Nenkabazwe. Amasimu agcwele amakhambi futhi kunezitshalo eziningi ezisebenzisa amathuba okushisa amnandi ngokwengeziwe ukukhiqiza izimbali zazo ezinhle kakhulu.
I-Los may izisho Basitshela ngesibhakabhaka esicwebile, imibala nokuphila, kodwa futhi nangezivunguvungu ezingakhukhula izitshalo ngaphambi kokuba kufike isomiso sasehlobo.
1 Injani inyanga kaMeyi eSpain?
2 Kwangathi Amazwi
Injani inyanga kaMeyi eSpain?
Ngaphambi kokudlulela emazwini, ake sazi ukuthi isimo sezulu sivame ukuba njani kule nyanga ezweni.
Ngesilinganiso se- I-16,4ºC (inkomba): 1981-2010), UMeyi inyanga enhle ukuqala ukujabulela imisebenzi yangaphandle. Abanye baze bafune ukuthatha idiphu yokuqala, ikakhulukazi uma besendaweni yaseMedithera. Futhi, kwezinye izindawo, njengeMurcia noma iCórdoba, i-mercury ye-thermometer ingakhuphukela ngaphezu kuka-30ºC.
Kepha futhi kufanele sikhulume ngamakhaza, ikakhulukazi enyakatho yenhlonhlo. Amazinga okushisa angahle abe ngaphansi kuka-0ºC, aze afinyelele nangu -4ºC ezintabeni ezisenyakatho yezwe.
Imvula emaphakathi ingukuthi 61 mm (inkomba): 1981-2010), ukuze UMay unesimo esivamile esimanzi, ikakhulukazi enyakatho-ntshonalanga eyedlulele, lapho izivunguvungu zivame ukungena ngokuvama okuningi, naseziqhingini zaseCanary.
Ngakolunye uhlangothi, isifunda saseMedithera yiso esina kakhulu.
Manje njengoba sesazi okuningi noma okuncane ukuthi inyanga kaMeyi ingasilethelani, ake sibheke ukuthi izisho zingasinika yini eminye imininingwane:
Kuze kube ngamashumi amane kaMeyi, ungakhumuli ijazi lakho: Singajabulela izinsuku ezimnandi kakhulu, kepha kuze kube phakathi nenyanga kunconywa ukuthi ungagcini izingubo ezifudumele, uma kungenzeka.
Inkungu kaMashi, ngoMeyi isithwathwa: Uma uMashi wayeyinyanga ebandayo, neqhwa kanye / noma isichotho, kujwayelekile ukuthi inkungu yakheke ngoMeyi.
ISan Isidro labrador, isabalalisa amanzi nelangaUsuku lukaSanta usuku lwe-15. Uzinikele kakhulu kulo lonke elaseSpain, ngokuba ngongcwele wabalimi kanye nezazi zezolimo namahlathi. Inyanga enezinsuku zemvula nezinye izinsuku ezibalele nezulu elihle, isiza utshani ukuba bukhule nezinhlamvu zivuthwe.
UMashi onomoya nono-Ephreli onethayo, uletha uMay onezimbali futhi omuhle: Lapho izimo zilungele kakhulu, kulula ukuthi uma uMeyi efika izitshalo ziba zinhle.
UMay noSepthemba abazalwane ababili: enye ebusika, enye ehlobo: isizathu asishodi. Izinyanga zombili ziletha izinsuku ezinhle kakhulu, kepha nezinsuku ezimbi kakhulu lapho kufanele sizivikele esimweni sezulu esibi.
UMay unezinyanga ezintathu ezimbi kuwo: Abanye abantu bacabanga ukuthi lena akuyona inyanga enhle, ngoba ngendlela efanayo nokuthi ngelinye ilanga ushisa kakhulu, enye kufanele ugqoke ibhantshi ukuze ugweme ukuba nesikhathi esibi.
UMeyi yinyanga enhle kunazo zonke onyakeni: abaningi bethu bacabanga ukuthi yinyanga engcono kakhulu yokwenza noma yini: phuma uyozilolonga kwezemidlalo, ujabulele ingadi, uyodla nabangane noma nomndeni endaweni ethile,
Kwangathi amanzi, okuhle okufiselekayo: ezingxenyeni eziningi uMay uyinyanga yokugcina yeziphepho ngemvula kuze kube nguSepthemba-Okthoba. Uma kungekho okuwayo kulezi zinsuku ezingama-30, isomiso sasehlobo sizodala inkinga engaphezu kweyodwa. Kungakho izimvula zikaMeyi zikwazi ukukhanyisa usuku.
Kwangathi kulawulwa, kungabandi futhi kungashisi, akomile kakhulu futhi akumanzi kakhuluAkungabazeki ukuthi inyanga enhle kakhulu yasentwasahlobo, ngoba umlimi uzokwazi ukujabulela izivuno ezinhle kakhulu uma isimo sezulu sihlala sizinzile.
Amanzi weSanta Rita, ngaphezu kokuphana: usuku lweNgcwele kunguMay 23, lapho intwasahlobo isihambile kakhulu. Uma izimvula zibambezeleka, izitshalo engadini azikwazi ukukhula ngokushesha njengoba nje umlimi ethanda.
Lapho uMeyi ezolamula, amakhaza kufanele asephelile: Njengoba izinsuku zihamba futhi nezinga lokushisa landa, amakhaza angaphela maphakathi nenyanga.
NgoMeyi i-nag iba yihhashi: amasimu agcwele amakhambi, ukudla kwamahhashi, okuba nempilo enhle futhi kube muhle ngokwengeziwe.
PNoma iSan Fernando, e-Andalusia bayavuna, kepha eCantabria iyaqhubeka imvula nokuduma: Usuku lukaSanta nguMeyi 30, lapho ihlobo liqala ukufika esifundeni saseMedithera, ngenkathi amafu aqhubeka nokufika enyakatho yenhlonhlo ehambisana nemvula.
Kwangathi umgadi wensimu, utshani obuningi nokusanhlamvu okuncane: uma intwasahlobo iphuzile, imvula ivamise ukuna ingxenye enkulu yaleyo nyanga, ezovumela okusanhlamvu ukuthi kukhule kakhulu kepha izindlebe azikwazi ukuvuthwa kahle ngenxa yokushoda kwelanga. Ngakolunye uhlangothi, imvula ilusizo kakhulu engadini, ngoba ithanda ukukhula kwezitshalo, okwenza nomlimi wonge amanzi.
Zikhona ezinye izisho oziwaziyo ngoMeyi?
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Isimo sezulu » Kwangathi Amazwi
Izingane eziyizigidi eziyi-175 zizothinteka ekushintsheni kwesimo sezulu unyaka nonyaka
Isimo sezulu esibi kakhulu sixhumene nokushisa komhlaba